Waxa lagu arko xaafadda Cimadevilla ee Gijón | Wararka Safarka
Waxa lagu arko xaafadda Cimadevilla
El Xaafada Cimadevilla waxay ku taalaa magaalada Gijón waana mid ka mid ah kuwa ugu saxsan ee aan booqan karno. Haddii aan aadeyno magaaladan Asturia waa inaan ka gudubnaa xaafadeeda ugu caansan, oo ay ka buuxaan goobo soo jiidasho leh iyo jawi aad u wanaagsan, gaar ahaan xilliyada sare. Taasi waa sababta ay u tahay meel muhiim u ah booqashada Gijón.
Haddii aad u socoto si aad u aragto ah magaalada Gijón waa inaad soo martaa xaafadan taariikhiga ah, markhaati ka ah dhammaan noocyada dhacdooyinka. Waa kii ugu da'da weynaa ee magaalada soo mara isla markaana yaqaanay sida loola jaanqaadi karo waqtiyada cusub. Maanta waxaan helnaa aag nolol ka buuxo laakiin sidoo kale leh soo jiidasho u gaar ah.
1 Sida loo tago xaafadda Cimadevilla
2 Taariikhda Cimadevilla
3 Cerro de Santa Catalina iyo Ammaanta Horizon
4 Darbiga Roomaanka iyo qubayska
5 Qasriga Revillagigedo
6 Goobta Dhalashada Jovellanos
Sida loo tago xaafadda Cimadevilla
Xaafaddani waxay ku taal magaalada Asturia ee Gijón, oo si fudud baabuur loogu tagi karo. Xaafadu waxay ku taal jasiiradda Santa Catalina waana sahlan tahay in la tago oo la helo, maadaama aan si fudud ula socon karno socodka xeebta iyo fiiri dhamaadka aagga Cimadevilla. Waxaa jira dhowr baarkinno gawaari oo u dhow qaarna sidoo kale aagga Cimadevilla, laakiin marwalba way fiicantahay inaad ka tagto gaarigaaga aagga cusub oo aad lugeyso. Marka waxaan sidoo kale arki karnaa qayb ka mid ah aagga casriga ah ee magaalada iyo xeebta, oo aad u qurux badan isla markaana leh dhul ballaadhan oo ballaadhan.
Cimadevilla waxay ahayd xaafada ugu faca weyn magaaladan waxayna ku taallay buur daar leh. Buurtan waxaa ku yaal kaniisadda 'Guild of Mareantes de Santa Catalina', oo ah kan ugu da'da weyn magaalada. Qarnigii toddoba iyo tobnaad ayaa la kiciyey buurta militariga si ay uga ilaaliso magaalada iyo xeebta weerarada burcad-badeedda ee badda. Waa aag taas oo xitaa jirtey joogitaan Roomaan, taasoo ina siineysa fikrad ahmiyaddeeda istiraatiijiyadeed sababo la xiriira xaaladda jireed ee ku wajahan badda iyo buur ku go'doonsan mawjadaha sii kordhaya. Qarnigii XNUMX-aad, waxaa la dhisay deked ganacsi oo soo afjarta go'doomintaas oo xaafaddan u beddeshay hoyga badmaaxiinta iyo kalluumeysatada, sida maanta loo yaqaan, oo ah xaafad kalluumeysato duug ah, oo ahayd ganacsiga ugu weyn ee magaalada. Tobanaankii sano ee la soo dhaafay aaggan waa la soo nooleeyay wuxuuna muhiimad u yeeshay taariikhdiisa. Dhismooyinka waa la dayactiray oo joogitaankoodana waa la hagaajiyay maxaa yeelay waa goob dalxiis aad u badan.
Cerro de Santa Catalina iyo Ammaanta Horizon
Buurta Santa Catalina maanta waa aag aad u qurux badan oo jardiin ah, oo ku habboon socodka iyo meesha aad ku arki karto dadka oo isboorti sameynaya ama xayawaankooda lugeynaya. Buurtan waxay na siisaa aragtiyo aad u wanaagsan magaalada, maadaama ay ku taal aag sare, iyo sidoo kale badda iyo cirifka. Aaggan waa meesha waxaan ka heli karnaa shaqada caanka ah ee Chillida ee loo yaqaan Elogio del Horizonte. Waa farshaxan weyn oo la taaban karo, oo leh cabirro cajaa'ib leh oo laga taagay aagga 1990. Waa farshaxan casriyeyn ku sameynaya qeybtii hore ee magaalada iyadoo marka lagu daro joogitaanka weynna ay soo saarto codad hawada dartiis, wax ah garaacid.
Darbiga Roomaanka iyo qubayska
Hadhaagii yaraa ee Roomaanku wuxuu ku haray xaafadda Cimadevilla, laakiin weli waxaan ka heli karnaa haraagii maydadkii qadiimiga Roomaanka ee Campo Valdés. Bari goobta qadiimiga ah ayaa la helay bilowgii qarnigii XNUMXaad laakiin dib uguguma soo noqoneyso ilaa Dagaalkii Sokeeye ka dib iyo ugu dambeyn XNUMX-yadii. Maanta waxaan arki karnaa qeyb ka mid ah musqulaha Roomaanka ee la dhisay qarnigii XNUMX-aad iyo darbiyada magaalada qadiimiga ah.
Aaggan duugga ah ee magaalada waxa kale oo ku yaal meel bannaan oo loogu talagalay daaraha waaweyn sida Revillagigedo, oo sidoo kale loo yaqaanno Qasriga Marquis ee San Esteban de Natahoyo. Qasrigaani wuxuu ku ag yaal marinka magaalada ee hadda jira. Waa tusaale wanaagsan oo ku saabsan qaab dhismeedka Asturian palatial ee qarnigii XNUMX-aad. Waxay leedahay qaab qurux badan oo baroque ah iyo laba munaaradood oo carnellated, la gaashaan heraldic hore ee fa ofade ah. Kaniisadda ku lifaaqan waa Kaniisadda Kulleejiyada ee San Juan Bautista, oo lagu dhisay qaabka Baroque oo la dhammaystiray dhawr sano ka dib qasrigii. Labadoodu waxay si fiican uga dhex muuqdaan magaaladii hore.
Goobta Dhalashada Jovellanos
Tani guriga dhalashada waxaa sidoo kale loo yaqaan Matxafka Jovellanos. Waa guri qurux badan laga soo bilaabo qarnigii XV oo ay iska leeyihiin qoyska Jovellanos. Waxay leedahay laba munaaradood oo dhinacyada ah iyo kaniisad ku lifaaqan. Fagaaraha guriga hortiisa waxaa lagu magacaabaa Plaza de Jovellanos. Matxafka waxaad ku arki kartaa qolal loogu talagalay nolosha Jovellanos. Dhinaca kale, waxaan arki karnaa qolal qaarkood oo aan ku qadarin karno shaqooyinka ay qabteen farshaxanno reer Astur ah qarnigii XNUMXaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Waxa lagu arko xaafadda Cimadevilla
Dalxiiska miyiga ee Galicia
Cala Llombards ee Mallorca